Mozambika: hetsika media feno famoronana, ahafahan’ireo vondrona marefo mahazo vaovao · Global Voices teny Malagasy
Tanjona ny hamokatra votoaty hjo an'ireo olona manana fahasembanana
Voadika ny 20 Desambra 2021 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Esperanto , Português
TV Surdo – fandefasana tao amin'ny YouTube (Sary: screenshot)
Ny TV Surdo, hetsika iray noforonina tamin'ny 2008, dia mikendry ny hamokatra votoaty ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitàna sy fandrenesana. Ilay fahitalavitra ihany no mamokatra izay votoaty ao aminy, mandefa amina foibe fahitalavitra telo miorina ao Maputo, renivohitr'i Môzambika.
Azo raisina ao amin'ny fantsona YouTube ihany koa ireo fandaharana novokarina. Ho an'ny Ivontoerana Iraisampirenena ho an'ny Mpanao Gazety, nipoitra ny TV Surdo mba hananana vaovao mampiaty satria ny ankamaroan'ireo fantsona fahitalavitra nahazatra dia matetika no manilika ireo olona manana fahasembanana, tsy iniana atao anefa.
﻿ Tanaty lahatsoratra iray tao amin'ny pejiny Facebook, nomarihan'ny TV Surdo fa na misy aza ireo lalàna manamora ny fahazoana vaovao, mbola mitohy voahilikilika hatrany ireo olona manana fahasembanana:
Taona fito aty aorian'ny nahalàny ilay lalàna 34/2014 (Desambra), izay mandrindra ny zo hahazo vaovao, mbola misy hatrany ny sedra manoloana ny fahafahana mahazo vaovao ho an'ireo olona manana fahasembanana.
Mandritra izany fotoana izany ny TV Surdo dia manohy mamelona ny fanantenana hanome vaovao ho an'ireo olona manana fahasembanana.
#Inclusive Media (Media Mampiaty)
Ny TV sy ny onjampeo no mbola fitaovana fampahalalam-baovao tena miely patrana.
Misy 727.000 ireo olona ao Môzambika no manana kazarana fahasembanana isankarazany, araka ny rakitra 2017 avy amin'ny fanisàn'ny ivontoerana nasiônaly misahana ny antontanisa (INE). Ahitàna olona maherin'ny 68.000 manana olana ara-pihainona ao amin'ilay firenena. Misy ihany koa olona maherin'ny 58.000 manana olana ara-pahitàna.
Ny fahitavaitra sy ny onjampeo no mbola fitaovana fampitambaovao miparitaka be indrindra.
Ao Môzambika, ny ankamaroan'ny vahoaka no tsy manana fahafahana miditra amin'ny media nomerika. 21 isanjato monja amin'ireo vahoaka mihoatra ny 30 tapitrisa ao aminy no manana fahafahana miditra amin'ny aterineto. Eo amin'ny fampiharana, ny fahitalavitra sy ny onjampeo no lasa lavitra indrindra ao amin'ny firenena.
Ho an-dry zareo Môzambikàna, ny onjampeo no tena fantsona fampahalalambaovao malaza be indrindra. Araka ny voalazan'ny Ivontoeram-Pifandraisana Sôsialy (ICS), manodidina ny 75 isanjaton'ny vahoaka ao amin'ny firenena no mandray vaovao amin'ny alàlan'ny onjampeo.
Ny tsy fahampian'ny fampiatian'ny media ao Môzambika dia nasongadin'ny fandalinana iray nataon'ny Institute for Multiparty Democracy. Marihan'ilay fandalinana ny tsy fahampian'ny fandaharam-pampianarana sy ny vintana ahafahana manao izany anaty onjampeo sy aterineto, ary fahitalavitra. Na ohatra aza ny valanaterina COVID-19 ka nanery ny sehatry ny fampianarana hitrandraka ireny fomba hafa ireny ho fitaovana vaovao entina mianatra, mbola tsy ampy ireo votoaty miresaka fanabeazana.
Fanamby iray hafa manodidina ny fahafahana mahazo fahitalavitra ny fanovàna ny rafitra analôgy ankehitriny ao Môzambika ho lasa nomerika .
Na efa nahemotra aza izy io, in-droa raha kely indrindra , dia efa heverina ny fikisahan'i Môzambika hiala amin'ny rafitra fahitalavitra analôgy hankany amin'ny rafitra nomerika, izay hahafahana mahazo fampitàna kalitaon-tsary sy feo tsaratsara kokoa — hatramin'ny fipoiran'ireo fantsona fampitambaovaovao sy vokatra vaovao eo amin'ny tsena môzambikàna. Ny orinasam-panjakana TMT (Transport, Multiplication, and Transmission), no manatontosa izany.
Araka ny voalazan'ny Ministry ny Fitaterana sy ny Fifandraisandavitra, Janfar Abdulai, efa an-dàlana ny fizorana hilàna amin'ny fahitalavitra analôgy ho amin'ny nomerika, satria efa tamin'ny 30 Septambra no vita ny dingana voalohany tamin'ny fanapihana (fanatsaharana) ireo onjampeo. Na izany aza, io toedraharaha io dia nampanahy ireo mpampiasa izay matahotra sao mety hisy anilikilihana ao anatin'izy io:
Fanapihana ny onjampeo analôgy sy ny fiantraikany
Fikisahana hiala amin'ny analôgy ho any amin'ny onjampeo nomerika: misy “fifanjevoana” any amin'ireo toeram-pivarotana mivarotra decoders ao Maputo#senami #falsacaodedocumentos #nampula #opaisonline #opais #gruposoicohttps://t.co/CIqriKKsgP pic.twitter.com/TXSs3GO90z
Anatin'io toedraharaha io , ny TV Surdo dia miavaka amin'ny fahafahany manatratra olona marobe, tsy voafetra sy natokana fotsiny ho an'ireo olona marenina manoloana ny media nomerika, fa koa ho an'ny olona manana endrika fahasembanana isankarazany.